कहाँ गए देशबन्ध्या गुरुवा ? – Janaubhar
कहाँ गए देशबन्ध्या गुरुवा ?
प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन ७, २०७० | 158 Views ||
देशबन्ध्या गुरुवा भन्ने शब्द अहिले सुन्दा जो कोहीलाई पनि यो के शब्द होला भन्ने सोध्न मन लाग्छ अर्थात यो भनेको के होला भन्ने सबैको लागि खुलदुलीको विषय पनि बन्न सक्छ । देशबन्ध्या गुरुवा थारु भाषामा भनिने शब्द हो र यो धेरै पुरानो शब्द पनि होइन । यो शब्द अहिले पनि थारु समुदाय रहेको गाउँमा जाने हो भने जताततै सुन्न पाइन्छ ।
थारु समुदायमा आफ्नो गाउँ, टोल गाविस हुँदै छिमेकी गाविससम्मको प्रगन्नाको रेखदेख गर्नुका साथै पूजापाठ गर्ने, गराउनेको नेतृत्व गर्दै आएका व्यक्तिलाई देशवन्ध्या गुरुवा भनिन्छ ।
देशबन्ध्या गुरुवा शब्दलाई अर्काे शब्दमा गुर्वाबा पनि भनिन्छ । तर, हिजोआज देशबन्ध्या गुरुवा बनाउने चलन छाडेपछि गुरुवाहरु भेटिन छाडेका छन् भने यो प्रचलन पनि हराउँदै गएको छ । देशबन्ध्या गुरुवाहरु ठूलो तान्त्रिक मन्त्रका ज्ञाता पनि मानिन्छन् ।
यी देशबन्ध्या गुरुवाहरु भएको सम्बन्धमा सानो किंवदन्ती रहेको छ । थारु अगुवाहरुको भनाइअनुसार प्राचीनकालमा धनपत नाम गरेका एक जना थारु जातिका व्यक्ति देशबन्ध्या गुरुवा थिए । तिनका चार जना छोराहरु थिए । तिनकै चार जना सन्तानलाई दाङ जिल्लामा देशबन्ध्या गुरुवाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यतिबेलादेखि थारु जातिका दहित, पछलडङ्ग्या, जिनगुनी र डेमनडौराका थर छुट्याएर ती थरका थारुहरुलाई यसको नेतृत्व (जिम्मेवारी) दिइएको थियो ।
जिम्मेवारी सुम्पिएर उनीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पठाइएको थियो । ती चार देशबन्ध्या गुरुवाहरुलाई काम गर्न सजिलो बनाउनको लागि क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गरिएको थियो । त्यतिबेला दाङमा चार प्रगन्ना विभाजन गरिएको थियो । जसअनुसार अग्ला प्रगन्ना, पश्च्ला प्रगन्ना, पाटु प्रगन्ना र पछ्ला प्रगन्ना गरि चार भाग विभाजन गरिएको थियो ।
अग्ला प्रगन्ना घोराहीदेखि पूर्व देउखुरीसम्मको प्रगन्ना ‘मद्वा’ देवता मान्ने जिनगुनी थरका व्यक्तिले नेतृत्व गर्दै आएका थिए भने पश्च्ला प्रगन्ना तथा छिल्ली प्रगन्नाको नेतृत्व ‘भे¥वा’ देवता मान्ने दहित थरका जातिले नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।
त्यसैगरि पाटु प्रगन्ना तथा पछ्ला प्रगन्नाको जगनथ्या देवता मान्ने पछलडङ्ग्या जातका थारु जातिले नेतृत्व गर्दै आएका थिए । त्यसैगरि बाँकी ठाउँमा छुटेका गाउँठाउँका डेमनडौरा जातिका थारुले रेखदेख गर्दै आएका थिए ।
गाउँ–गाउँमा मारकाट, हिंसालाई अन्त्य गर्नुका साथै दिगो शान्ति स्थापना गर्नको लागि देशबन्ध्या गुरुवाहरुको ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ । यति मात्र नभएर गाउँमा जो कोही बिरामी परेको बिरामीहरुलाई गुरुवामार्फत् तन्त्रमन्त्रले निको बनाउने कार्य पनि गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसैगरि बिग्रेको अन्नबाली सपार्नको लागि गुरुवाहरुको तन्त्रमन्त्रको माध्यमबाट राम्रो बनाउने गरेको पनि थारु अगुवाहरु बताउँछन् ।
विगतमा यति ठूलो महत्वपूर्ण काम गर्दै आएका देशबन्ध्या गुरुवा रहने प्रचलनका बारेमा अहिले थारु जाति र अरुले पनि चासो नराखेकाले हराउँदै गएको छ । संस्कृतिका धनी थारु जातिमा हुने कयौं पूजापाठहरु देशबन्ध्या गुरुवाहरु नहुँदा हराउँदै गएका छन् । त्यतिबेला देशबन्ध्या गुरुवाहरु हुँदा नियमितरुपमा पूजाआजा हुँदैको थारु समुदायमा अहिले भने समयमा पूजापाठ हुने त परै जाओस् कुनै गाउँमा त पूजापाठ गर्नसमेत छाडिसकेका छन् ।
थारु समुदायमा देशबन्ध्या गुरुवाहरुमा ठूलो शक्ति रहेको विश्वास गरिन्छ । वर्षात्को समयमा पानी नपरेको बेला देशबन्ध्या गुरुवाहरुले पूजापाठ गरे पानी पर्ने विश्वास गरिन्छ । उसो त विगतमा थारु जाति मात्र नभएर अरु समुदायले पनि देशबन्ध्या गुरुवाको विश्वास उत्तिकै गर्दै आएको पाइन्छ ।
त्यसैगरि देशबन्ध्या गुरुवाहरुमा ठूलो तन्त्रमन्त्र भएकाले पनि देवताहरुलाई समेत नजरबन्द गरिदिने अर्थात् देवतालाई उठिबसी गराइदिने गरेको किंवदन्ती पनि सुन्न पाइन्छ । उसो त अहिले पनि गुरुवाहरुले देवता (भूत)लाई थुन्ने गर्छन् भनिन्छ । परम्पराअनुसार पूजाआजा गर्ने बेला देवता (भूत)लाई फलामको किलाकाँटी ठोकेर तन्त्रमन्त्रको माध्यमबाट थुन्ने गर्दछन् । देवताहरु जब गाउँमा बिगबिगी मच्चाउँछन्, त्यतिबेला देवता (भूत)हरुलाई देशबन्ध्या गुरुवाहरुले थुन्ने गर्र्दछन् ।
त्यस्तै, विभिन्न पूजाको माध्यमबाट गाउँमा शान्ति ल्याउने र गाउँको अन्नबालीमा रोग व्यथा नलागोस् भन्नेर पूजाको माध्यमबाट रोगव्याधालाई हटाउने प्रयास पनि गर्दछन् देशवन्ध्या गुरुवाहरु । विगतमा गाउँमा मान्छे बिरामी परेपछि उपचार गर्ने न स्वाथ्य चौकी थियो न त अस्पताल । विरामीको उपचारसमेत देशबन्ध्या गुरुवाहरुले गर्दथे । जति मान्छे बिरामी हुन्थे, देशबन्ध्या गुरुवाको खोजी हुन्थ्यो ।
त्यसैगरि थारु जातिका मानिसले सबै कृषिमा निर्भर रहेकाले त्यतिबेला पनि धान खेतीदेखि तोरी हिउँदे बालीमा रोग लागेपछि औषधि पाइदैनथ्यो । त्यसमा लागेको रोग हटाउनको लागि पनि थारु समुदायमा तिनै देशबन्ध्या गुरुवाहरुको माध्यमबाट पूजापाठ गरि रोग हटाइने गरेको बुढापाका थारु किसानहरु बताउँछन् । यसरी रोगव्यधालाई हटाउनको लागि र गाउँमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नमा पनि देशबन्ध्या गुरुवाहरुको ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ ।
यतिमात्र नभएर त्यतिबेला देशबन्ध्या गुरुवाहरुले गाउँ–गाउँमा धेरैभन्दा धेरै गुरुवा, वैदवा पनि उत्पादन गर्ने गर्दथे रे । जसले गर्दा सर्वसाधारण मानिस समस्यामा पर्दा गुरुवाहरु खोज्नलाई दुःख नहोस् ।
Prevकार्यदिशामा र संगठनमा हल खोजौं व्यक्ति र पदमा होइन
Nextएमाओवादीको संगठनात्मक सकस